Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe 4 Semalt Dévoile 4 Concepts De Génération De Leads Surefire
Izinkampanini zokumaketha zesevisi zisiza ukukhiqiza amathuba okuthutha le nkampani. Lokhu akuyona into elula futhi kufanele uthole ukulungiswa okuthile ukuze wenze kahle futhi ukhiphe ukuphuma. Zonke izikhombisi ze-haute qualité ont le potentiel de conversion. Cela usho ukuthini abantu abathintekayo kwi-Web site bese bethola ukuthi bafuna ukuthola imininingwane yabo uma bethola ukuthi bayayithola yini - stufetta per il bagno.
Ngenhlanhla ukuthulukisa ama-commerçants, kunezinye izindlela ezizokwazi ukuzithuthukisa amathuba okuba ngcono.
UMichael Brown, umqondisi we-client des clients uSomalt , unikeza iziphakamiso kubantu ababhekene nokunciphisa ukuguqulwa ngenxa yezinkambiso zomphakathi:
1. I-Produit grand content
Lokhu okuqukethwe kubalulekile ukubaluleka kwebhizinisi. Dlulisa ama-prospect prospects, unommeleli kufanele ube ne-content enembile, ngoba yilokhu okuqukethwe okugqoke ama-consommateurs kuleli site endaweni yokuqala. Ngaphandle kwalokho, kunamaphesenti angama-62% okungenani okuyizindleko zokuthengisa futhi kudala kuze kube izikhathi ezintathu ngaphezulu kwamathemba. Uma kunjalo, kufanele ube nomphakathi okumele usebenze ukuze usebenze. Le nhloso yomphakathi ivumela abantu ukuba baqaphele amaphuzu angu-douloureux, bese bethola izixazululo nezixazululo zokuvakashela.
2. Distributer un content attentif
Ngaphandle kokuhlelwa kwemisebenzi, yonke imizamo evelele ukudala okuqukethwe kuzoba yimpumelelo..I-goal is to enable bonke abantu ukuba bakwazi ukuthola ulwazi kanye nokuziqhenya ngokuzithandela mayelana nendlela yokubhekana nabo.
La meilleure idée est le marketing et l'optimisation des moteurs de recherche en coulisses (SEM & SEO). I-trafic de site Web organique iphakathi kwama-prospect sources of high quality ngokusho kwe-state de capture de plomb de Formstack. Ukunikeza ukunakekelwa okwanele ku-SEO ne-SEM kuzovumela ukuthi amakhasimende asebenzise ama-keywords ukuze athole okuqukethwe. Ngaphandle kwalokho, ukungenisa izimali zomphakathi ezifanelekile ukuthulukisa isikhangiso somphakathi kuyimoto ebalulekile ukuthi ivumela ukuba uhlanganyele ngokuqukethwe kwemininingwane.
3. Amafomu okuqukethwe afanelana nama-mobiles
Uma ngabe abasebenzisi befika kuleli sayithi, i-objectif is to convert them. Lokhu kuguqulwa kusho ukuthi amaklayenti anikezela ulwazi mayelana nabo ngokusebenzisa i-formulaire en ligne. Ukusetshenziswa kweminye imfono yefoni kuyadingeka ukuthi kudingeke ukuba kutholakale ukukhangisa ku-intanethi ukuze ukhiphe amafomula afanelekile ukuze ugcine ukuguqulwa kwamanani. Ukusebenzisa ama-mobiles amafomula kuhloswe ukuthi kuhlolwe ukubonakala kwabo kwi-écrans plus petits. Abasebenzisi abadingeki ukuba babe nzima ukugcwalisa amafomu abo kumakhalekhukhwini wabo. Uma kudingeke ukuba usebenzise i-screen, le-slide kumele ihlale phansi bese ubiza ucingo oluphansi ukuze usebenzise isichazamazwi.
4. Ukuhlola ama-performances
Thumela umthengi, lo msebenzi awuzange uqotshwe imoto ukuthi udinga ukulungiswa njalo. Le suivi de le site web de performance avec Google Analytics yenza ukuthi uzimisele ukuthola imizamo yokuthengisa umsebenzi. Ngenxa yalokho, ngokubambisana nokuzibandakanya, kulungiswe izinzuzo ezivela ekukhangiseni ngenxa yale mizamo. Lezi zimfomu zisiza ukukhomba izigameko zokuzihlukanisa kanye nezithiyo ezingenzeka ekusebenziseni ukukhangisa.
I-strategy enikezela izinkampani kanye nemisebenzi yokuthutha imisebenzi ethile isebenza kahle kuze kube yilapho izambatho zabagibeli bezitholakala kulesi sihloko. Uma i-marketeur isebenzisa i-optimum form, iqinisekisa ukuguqulwa kwe-entreprise e-éventuelle. Okokugcina, ukuhlolwa okuqhubekayo kwedatha kuvumela ukuqeda imizamo kanye nokudala amathuba okubheka.